Shirka Madasha wada tashiga Qaran oo berri ka furmaya magaalada Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta gaaray wafuud Soomaali ah iyo kuwa Caalami ah, kuwaasoo maalinta berri ka qeyb galaya shirka Madasha wada tashiga Qaran ee looga hadlayo hanaanka doorasho ee sanadkan 2016 dalka ka dhici doona.
Shirka ayaa waxaa la filayaa inuu si rasmi u furo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo berri tagaya Kismaayo.
Wafuuda maanta gaaray Kismaayo ayaa waxaa ka mid ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, Madaxweynayaasha Koofur Galbeed, Puntland iyo Galmudug, kuwaasoo si weyn loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Kismaayo.
Sidoo kale waxaa maanta gelinkii hore gaaray magaalada Wasiirka arrimaha Dibadda Itoobiya Dr. Tedros Adhanom, oo ay wehliyeen Ergeyga IGAD u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey iyo xubno kale.
Waxaa kaloo magaalada gaaray xubno ka socday beesha Caalamka, Midowga Yurub, Ingiriiska, Qaramada Midoobey iyo xubno kale oo ay ku jiraan Safiirada wadamada qaar u jooga Soomaaliya.
Shirar gaar gaar ah oo ay leeyihiin Madaxda ayaa caawa ka socda magaalada, waxaana loogu gogol xaarayaa shirka maalinta berri furmi doona.
Ammaanka magaalada Kismaayo ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo qeybo ka mid ah magaalada ay maanta aheyd mid bandaw ah, maadaama ciidamo isugu jira kuwa Jubbaland iyo AMISOM la soo dhoobay
Shirka Kismaayo ayaa la filayaa in lagu go’aamiyo nooc doorasho oo dalka ka dhaca, iyadoo wali Madaxda Soomaalida aanay isku raacin hal aragti, iyadoo ay jirto kala qeybsanaan la xiriirta qaabka doorashada oo la isku haayo qaab deegaan inay noqoto iyo in Baarlamaanka lagu soo xulo qaabka 4.5.
Lama oga sida Madaxda Soomaalida u muujin doonaan isu tanaasul, maadaama waqtiga uu socdo, isla markaana la filayo ka hor shirka Istanbul ee bisha Febraayo in la gaaro go’aan mid ah oo ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta Agosto kadib, maadaama horay loo shaaciyay in aanay dhici karin doorasho Hal qof iyo Hal Cod.